आज भ्यालेन्टाइन डे : तपाईको प्रेम प्रस्ताव कसलाई ? – सुदूर दर्पण
आज भ्यालेन्टाइन डे : तपाईको प्रेम प्रस्ताव कसलाई ?
काठमाण्डौ । आज भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस मनाइँदै छ । हरेक फेब्रुअरी १४ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यो दिन प्रेमिप्रेमिकाले एक अर्कालाई उपहार दिएर माया साट्ने र प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्छन् । आजकै दिन आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई उपहार दिने चलन पनि छ ।
विशेषगरी युवापुस्ताले १४ फेब्रुअरीको दिन भ्यालेन्टाइन डेु लाई प्रेमसम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसरका रूपमा लिन्छन् । पहिले(पहिले युवापुस्ता र सहर बजारमा मात्रै प्रणय दिवस मनाउने गरिए पनि अहिले गाउँघरमा पनि यसको चर्चा हुन थालेको छ ।
भ्यालेन्टाइन डेु को सुरुवात सन् २६९ मा रोमनबाट सुरु भएको मानिन्छ । नारीसँगको सम्बन्धका कारण सेना कमजोर हुने भन्दै सम्राटले प्रेम र विवाहमा रोक लगाएका थिए ।
तर रोममा भ्यालेन्टाइन नाम गरेका पादरीले सम्राटको त्यो अभियानलाई सार्वजनिक रूपमै उल्लङ्घन गर्ने घोषणा गरेका थिए । आफ्नै अभियानविरुद्ध गतिविधि सह्य नभएपछि सम्राटले पादरीलाई पक्राउ गरी सन् २६९ को फेब्रुअरी १४ तारिखमा मृत्युदण्डको सजाय दिइएको थियो । प्रेमका लागि भ्यालेन्टाइनको यही बलिदानको सम्मानमा भ्यालेन्टाइन डेु का रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
कक्षा ११ को परीक्षाफल प्रकाशित
सोडारी दम्पतीद्धारा बैवाहीक बर्षगाँठमा क्यान्सर पिडीतलाई आर्थिक सहयोग
टी–ट्वान्टी क्रिकेट : कुशल र आसिफ चम्किदा नेदरल्यान्ड्स पराजित
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि अछाममा ७१ बिद्यालय छनौट
भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रममा सावधानी अपनाउन सरकारको आग्रह
अछाममा अनुदानको आयोडिनयूक्त नुनमा कालोबजारी
छात्रामाथी यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक कुँवरलाई कारबाही गरीने
आमाले चार छोराछोरीसहित कर्णाली नदिमा हाम फालिन् : दुई छोरीको शव भेटियो,आमासहित तीन अझैँ बेपत्ता
ट्याक्टरको ठक्करबाट देउबाको मृत्यु
अछाम कहिले देखि आसाम र अच्छाम ?
अछाममा जीप दुर्घटना,२ जनाको अवस्था मध्यम : अछाम प्रहरी